Ukuhlaziywa kwe-Semalt: 15 Uninzi lweeWebhu eziKhenkcekileyo zeWindows Screen Scraping
Imayini ye-mining okanye izixhobo zokumbiwa kweemigodi zenzelwe ukuchonga nokufumanisa iipateni iifasethi ezinkulu. Ababancedisi nje kuphela inani elikhulu lewebhusayithi kodwa basinikezela ngolwazi oluchanekileyo nolunenyaniso. Ukufumana izixhobo ezifanelekileyo zokubambisa umxholo wewebhu kuzokukunceda ukuphucula ukusetyenziswa kwenjini yesayithi yakho.
Nolu uluhlu olubanzi lwezinto ezi-30 ezifanelekileyo zokubambisa umxholo wewebhu.
I-AMI I-Intelligence Intelligence yisoftware enamandla ephanda, egcina, ehlaziya kunye nokuqokelela idatha kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo.
I-Bixolabs sele ijikeleze ixesha elide. Yinkqubo ye-intanethi ye-intanethi eguquguqukayo kunye neyemnandi eyakhiwa kumafu e-Amazon (EC2) kwaye inezinto ezininzi zokukhetha.
I-Crawlera yi-rotator ye-IP edumile kunye ne-extractor yewebhu engabonakali kuphela idatha eyiluncedo kuwe kodwa ivumela i-bots ukukhawulela i-website ngokuthe ngqo.
I-Extractive ingatshintsha idatha engaqinisekanga kwiinkcukacha ezakhiweyo kunye ne-semantic ngaphakathi kwimizuzwana.
I-Ficstar yinkqubo ebalulekileyo yewebhu kunye neprogram yolawulo lweedatha ezifanelekileyo kumashishini amancinane namakhulu amakhulu.
Umfaki-zimfono ubonakala ithuluzi lokutsala iwebhu esivumela ukuba sikhiphe zombini imibhalo kunye nemifanekiso.
I-Helium Scraper yenye yezona zinto zinamandla kakhulu kwiinkqubo ze-mining web content;
I-Import.io iyinto elula kunye neendlela ezimangalisayo zokungenisa nokukhupha idatha yewebhu. Yisistim esihlawulelwayo kwaye singasetyenziselwa bobabini ngabaphuhlisi kunye neewebhumasters.
iWebScraping iyona nto ibalulekileyo ye-web scraper kunye ne-data mining service
11.Qaphela i-Anthracite WebMining Mining software
Le software ye-mining web iwebhu ibonisa ukwakha izikhwiru kwaye ihlaba iwebhsayithi yakho kwiwebhusayithi. ukukhusela nayiphi na imfuno yamakhowudi. Ifuna i-MacOS X 10.4 okanye nayiphi enye inguqu eqhubekileyo ukuze wenze izinto zenziwe ngokufanelekileyo.
12.PDF I-Software Data Extraction Software
Iinkcukacha ezivela kwiifayile zePayili zinokukhishwa ngokusebenzisa le nkqubo enamandla, kwaye ivela kwinguqulelo yamahhala.
13. I-Cloud Crack
I-Scrapy Cloud ikhupha iibhiliyoni zamaphepha ewebhu rhoqo ngenyanga kwaye inikeza isicwangciso samahhala.
Isikrini saseSkraper sikuvumela ukuba uqokelele iinkcukacha ezimbini kunye nezakhiwo ezilungisiweyo. Igcina idatha yakho yokukhuphela ngokukhawuleza.
IWebebMiner yinkonzo yokwehliswa kwewebhu eyenza ukukhupha okanye umxholo wam weendaba ezahlukeneyo kunye neeblogi zangasese.